Therapeutic Riding Programme - Hinds Feet Farm
Hinds' Feet Farm's Therapeutic Riding Programme, "Equine Explorers", yakagadzirirwa nhengo dzeHinds' Feet Farm (Huntersville Chete), uye inotariswa nemudzidzisi wedu wekutasva uye Mutungamiriri weMasevhisi eNhengo, Allison Spasoff, nerutsigiro kubva kuEquine Volunteers yake inokosha.
Pamusoro pekumisikidzwa kweTherapeutic Riding sessions, nhengo dzinodzidza equine maitiro, kutasva bhiza, equine anatomy, uye nezvezvimwe zvingangoitika zveTherapeutic Riding ruzivo:
Kufamba uye kugadzirira mhinduro
Kukurudzira uye kutanga
Kuwedzera pfungwa yekugonesa / kutonga pamusoro pehupenyu hwemunhu
Kuvandudzwa kwekuenzanisa, kubatana, toni yemasuru, muviri uye kuziva kwenzvimbo
Kuzviparadzanisa nevamwe kwakaderera
Kukwidziridzwa kwemoyo, kuzvidzora uye kuzviremekedza
Nhengo dzeTherapeutic Riding sessions dzinovavarira kurumbidza, uye kushanda pamwe chete nenhengo dzese zvinangwa zvekudzoreredza zvinotangwa pakupinzwa kumabasa paHinds' Feet Farm.
Equine Explorers haina kugadzirwa kuve chirongwa chakazvimirira, panzvimbo yekusimudzira zviitiko izvo nhengo dzedu dzatove kuita, uye kuvapa huwandu hwakawanda hwesarudzo dzechirongwa. Sezvo zvakadaro, purogiramu yekutasva inopihwa chete kune nhengo dzeHinds' Feet Farm.
Therapeutic Riding sessions inotariswa uye inofambiswa neyakanyoreswa PATH International murairidzi wekutasva (http://www.pathintl.org/) uye Director weNhengo Services, Alison Spasoff, nerutsigiro runobva kuboka revazvipiri vakadzidziswa uye vakazvipira.
Therapeutic Riding hazvaigona kuHinds' Feet Farm pasina rupo rwekuzvipira rwevazvipiri vedu vanobatsira kudya, kutarisira, kurovedza mabhiza edu uye kushanda pamwe nevashandi nenhengo kuchengetedza zviitiko zvedu zvekutasva zvakachengeteka!
Kana iwe uchida kuzvipira mune yedu Therapeutic Riding Chirongwa, ndapota taura Alison Spasoff kana kushanyira isu Peji Yekuzvipira